कस्तो प्रकारको रोग हो डेंगु ? कसरी बच्ने ? – Health Post Nepal
२०७६ साउन ११ गते १८:३३
गर्मी मौसममा विशेषगरी तराईमा विभिन्न किसिमका रोग फैलिन्छन् । हुन त गर्मीमा जुनसुकै ठाउँमा पनि रोगको प्रकोप देखापर्छन् । त्यसमाथि पनि वर्षाका कारण निम्तिने प्राकृतिक प्रकोपले पनि विभिन्न रोग फैलिरहेका हुन्छन् । विशेषगरी तराईमा फरकखालका रोगले व्यक्तिहरू संक्रमित भइरहेका हुन्छन् । तराईमा गर्मीयाममा देखिने विभिन्न रोगमध्ये अहिले महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको रोग हो, डेंगु ।
बूढीगंगा गाउँपालिका–२ मा अवस्थित विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा पनि अहिले प्रत्येक दिनजसो डेंगुका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । वास्तवमा डेंगु के हो ? यसका लक्षण के–के हुन् ? यो रोग कसरी फैलिन्छ ? अनि यो रोगबाट बच्ने उपाय के–के हुन् ? यी विषयमा केन्द्रित भएर विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल मेडिसिन विभागका डा. रामकुमार मेहेतासँगको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सामग्री प्रस्तुत छ ।
डेंगु संक्रमित ९७ प्रतिशत बिरामीमा सामान्य ज्वरोका रूपमा लक्षण देखिन्छ । साधारण लक्षणमा ५ देखि ७ दिनसम्म जिउ एकदमै दुख्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, आँखामुनि दुख्नेलगायत हुन्छन् । शरीरका कुनै पनि भागबाट रक्तस्राव बढी हुनु, रक्तचाप कम हुनु र रगतमा प्लेटलेट्स कम भएमा खटिरा धेरै आउन डेंगुका असाधारण लक्षण हुन् र यो अवस्थालाई जटिल मानिन्छ । यसको निर्मूल गर्ने नभई लक्षणअनुसारको उपचार मात्र हुन्छ । सँगसँगै यसले अरू रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई पनि कम गरिदिन्छ, जसका कारण अन्य रोगले आक्रमण गरेमा झन्–झन् जटिल बन्दै जान्छ ।
(विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल)
One thought on “कस्तो प्रकारको रोग हो डेंगु ? कसरी बच्ने ?”
radhe bisunke says:
अनि यो डेगि कति दिन सम्म निको हुन्छ होला